I-TensorFlow ne-Pytorch: Amapulatifomu Womthombo Ovulekile we-AI | Kusuka kuLinux
I-TensorFlow ne-Pytorch kukhona amapulatifomu ama-2 «Inteligencia Artificial (IA)» de «Código Abierto». Eyokuqala yadalwa yiGoogle kanti eyesibili isetshenziswa kakhulu yiFacebook. Kepha, Kuyini i-Artificial Intelligence? La «IA», njengoba sishilo esihlokweni esandulele "Isine Revolution Yezimboni: Indima yeSoftware yamahhala kule nkathi entsha" ingenye yezobuchwepheshe obusha obusha obushintsha inkambo yomphakathi wethu wedijithali wekhulu lama-XNUMX.
Kafushane, ungachaza ifayela le- «IA» njenge ubuchwepheshe okuvela ku- inhlanganisela ye- ubuchule obuphezulu yakhelwe ngenhloso yokuthi dala imishini (isoftware) ezethula okufanayo amandla ukuthi i ukuba ngumuntu.
La «IA» kwenza kube nokwenzeka imishini ifunda kokuhlangenwe nakho kwabo noma kwabanye abantu, uvumelane nezimo futhi uzivumelanise nolwazi olusha nezimo zokuphila, futhi wenze imisebenzi njenganoma yimuphi omunye umuntu. Ngaphezu kwalokho, lobu buchwepheshe buvame ukuhambisana noma ngesandla sabanye, ikakhulukazi 2 obaziwa ngokuthi «Aprendizaje Profundo (Deep Learning)» y «Procesamiento del Lenguaje Natural (Natural Language Processing)». Futhi i- «Big Data» ibuye isetshenziswe kabanzi kuyo.
Ngaleyo ndlela, ukuthi lobu buchwepheshe buvumela amakhompyutha wamanje namarobhothi, futhi mhlawumbe usuku olulodwa ama-Android, ukuthi abe baqeqeshwe ngempumelelo nangempumelelo, ukwenza imisebenzi ethile njengokucubungula inani elikhulu ledatha, ukubona amaphethini kudatha, ukwenza noma ukuxazulula imisebenzi yokudlala noma yomsebenzi, ukuhambahamba (ukuzishayela) noma ukuhambisa izinto ezindaweni ezahlukahlukene, phakathi kwezinye izinto eziningi.
1 Izinhlobo ze-Artificial Intelligence (AI)
2 Amapulatifomu we-Open Source AI
2.1 I-TensorFlow: Iyini futhi yiziphi izici zayo?
2.2 I-Pytorch: Iyini futhi yiziphi izici zayo?
2.3 Ezinye izindlela ziyatholakala
Izinhlobo ze-Artificial Intelligence (AI)
Ngamafuphi, i-AI ingaba wusizo olukhulu ukudala:
Izinhlelo ezicabanga njengabantu: para ukushintsha ukusebenza kwemisebenzi, njengokuthi: ukwenza izinqumo, ukuxazulula izinkinga nokufunda. Isibonelo: Rama-neural edes wokufakelwa.
Izinhlelo ezisebenza njengabantu: Ukwakha imishini leyo yenza imisebenzi efana neyabantu. Isibonelo: Rama-obots nama-Android.
Amasistimu acabanga ngokunengqondo: para ukulingisa ukucabanga okunengqondo (ukubona, ukuhlaziya, nokwenza) kwabantu. Isibonelo: Sizinhlelo zezazi.
Izinhlelo ezisebenza ngendlela enengqondo: para ngokulingisa ngokulingisa ukuziphatha komuntu. Isibonelo: Isilebhuabantu abahlakaniphile.
Amapulatifomu we-Open Source AI
I-TensorFlow: Iyini futhi yiziphi izici zayo?
Yipulatifomu ye-Artificial Intelligence esetshenziswa kakhulu emhlabeni
Yenziwe i-Google (Ubuchopho) ukuze isetshenziswe ngaphakathi futhi ikhishwe ngaphansi kwelayisense yomthombo ovulekile we-Apache 2.0 ngoNovemba 9, 2015, ithathe isikhundla somanduleli wayo ovaliwe, iDistBelief.
Yakhiwa njengomtapo wolwazi ovulekile ohlose ukufunda okujulile, okutholakala nakwiWindows, Linux, MacOS, kanye nezinkundla zamaselula ezibandakanya i-Android ne-iOS.
Inhloso yalo ukwanelisa izidingo zamasistimu akwazi ukwakha nokuqeqesha amanethiwekhi we-neural ukuthola nokuqonda amaphethini nokuhlangana, okufana nokufunda nokucabanga okusetshenziswa ngabantu.
Okwamanje isetshenziselwa ucwaningo nokukhiqizwa kwemikhiqizo yakwaGoogle, esikhundleni sendima yomthombo wayo ovaliwe owandulelayo, i-DistBelief.
Igama lalo livela ekusebenzeni okwenziwa ngamanethiwekhi we-neural alesi simiso kuma-multidimensional data arrays avame ukubizwa ngokuthi: Tensors.
Nota: Imininingwane eminingi ngaye ingatholwa kuye Iwebhusayithi esemthethweni.
I-Pytorch: Iyini futhi yiziphi izici zayo?
Yipulatifomu yesibili esetshenziswa kakhulu ye-Artificial Intelligence emhlabeni.
Waziwa kakhulu ngokuba ngumtapo wolwazi kaNdunankulu wezinhlelo zokufunda ezijulile.
Yiphakethe lePython elenzelwe ukwenza izibalo zamanani kusetshenziswa uhlelo lwe-tensor. Ngaphezu kwalokho, kusebenza njengokufaka esikhundleni sephakeji le-Numpy.
Ivumela ukwenziwa kwayo ku-GPU ukusheshisa ukubala okwenziwe. Isebenzisa ngaphakathi i-CUDA, i-API exhuma i-CPU kwi-GPU eyenziwe yi-NVIDIA, evumela ukusheshisa izinqubo ezihamba kancane ngokwesiko njengokuqeqeshwa kwemodeli.
Isetshenziswa kabanzi kuzinqubo zokucwaninga nentuthuko emkhakheni wezemfundo ejulile, egxile kakhulu ekwakhiweni kwamanethiwekhi we-neural, ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo.
I-PyTorch isebenza ngamagrafu ashukumisayo esikhundleni sama-static.
Udinga ukwazi ulimi lohlelo "Lua" ukuze ulusebenzise.
Sithemba ukuthi ukhona "okuncane kodwa okuwusizo" mayelana nalezi 2 ezithakazelisayo «Plataformas de Inteligencia Artificial (IA) de Código Abierto» izingcingo «TensorFlow y Pytorch», okungokwamanje, lapho cishe bonke ochwepheshe be-AI emhlabeni wonke basebenza, banesithakazelo esikhulu nokusetshenziswa, kukho konke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-TensorFlow ne-Pytorch: Amapulatifomu e-Open Source AI
I-Edge, isiphequluli sewebhu esisha seMicrosoft sesiqala ukwamukela izandiso